ချစ်တယ် ဆိုတာ မထူးဆန်းပါဘူး....လူတိုင်းလူတိုင်း ချစ်တက်ကြပါတယ်॥။အချစ်ဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင် သလို စွန့် လွှတ် အနစ်နာခံခြင်းလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ ॥အချစ်ဆို တာ ဘာလဲ လို့ ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ ကို မှ မှန်တယ် မှားတယ်ပြောလို့ ရမယ်မထင်ဘူး ဘာလို့ လဲဆိုတော့ လူတယောက်ရဲ့ ယုံကြည့်ချက် ဟာ အချစ်ဖြစ်နေလို့ ပဲ॥။ ဒါပေမဲ့ အချစ် က မငိုတက်တဲ့ လူတယောက်ကို ငိုအောင်လုပ်နိုင် သလို ...ရယ်အောင်လည်း လုပ်နိုင်တယ်....။ တခါတလေ အချစ်ဆို တာ အေးမြသလို တခါတလေ ဆို မီးတောက်ထက် ပူပါတယ်...။ အချစ်ကြောင့် လူတွေဟာ လမ်းပျောက် တက်ကျသလို ...အချစ်က လူတယောက် ကို ရူးသွားအောင်လည်း လုပ်နိုင်တယ်...။ ဒါပေမဲ့ မိန်းခလေးတွေရဲ့ အချစ်နဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေ ရဲ့ အချစ် တထပ်တည်းတော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲနော်...။ ဒါပေမဲ့ အချစ်အတွက် ဘ၀ကို အရှုံးပေးတဲ့လူတွေ ကို တော့ အားမပေးချင်ဘူး....။
............. ငြိမ်းနားလည် တဲ့ အချစ်ကတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ယုံကြည်မှု၊ နားလည်မှုတွေ နဲ့ တည်ဆောက် နိုင်မှအဲအချစ်က ခိုင်မြဲမှာ...။ ချစ်တော့ ချစ်ပါတယ်...ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ အပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိဘူး...နားလည်မှုမရှိဘူး...အမြဲတမ်းသံသယတွေပဲ ၀င်နေရင် အဲချစ်ဟာ ပူလောင်လွန်းပြီး တာရှည်လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိ မှာ မဟုတ်ပါဘူး...။ ဘယ်မိန်းခလေးမှလည်း အဲအချစ်ကို လိုချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ယောင်္ကျားလေးတွေရော?...
................"ငြိမ်း မချစ်တဲ့သူတယောက် ကို ဘယ်လို နည်းနဲ့ မှလက်မထပ်နိုင်ပါဘူး ။ ငြိမ်းအတွက်တော့ ဘ၀မှာ အချစ်ကအရေးပါ သလို...မချစ်ထိုက် သူတယောက် ကို ချစ်မိတဲ့ အချစ် ဟာ ဘ၀တခုတော့ ဖြစ် မလာနိုင်ပါဘူး....။ ကိုယ့် အပေါ်တန်ဖိုးထား နားလည်သလို သူ့ အပေါ်လည်း နားလည်မှုပေးနိုင် မှ အချစ်ဆို တာ ခိုင်မြဲတာပါ...။ "
ခက်ခဲတဲ့ ပုဒ်စာ တစ်ပုဒ်ရဲ့
အိမ်မက်တွေရဲ့လှို့ ဝှက်ချက်......။
ဲပြီးတွားပါပီချင့် အကို ရဲရင့်နီ ရေ ကျေနပ်တော့ နော်...မောလိုက်တာတော ပြောရတာ...အအေးလေးတောင် မတိုက်ဘူး :P... ပထမတော့ ဒီတိုင်းပဲထားမလို့နောက် မှ ဒုကပေးဖို့သူတွေ ရှိနေတာ သွားသတိရလို့ ... မဲပေါက် တဲ့သူတွေကတော့ ဘုန်းကြီး ၀တ်ဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ အကို ကြီး အလှတရား သူကတော့ ကို ရဲရင့်နီ စာရင်းထဲပါပြီးသားဆို ပေမဲ့ထပ်မံ ပြီး ထောက်ခံပေးလိုက်ပါတယ် ၊ လူပို ကြီး အဲဟုတ်ပါဘူး လူပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်ဆို တဲ့ အကို ကြီး ဂျူဝသန် ၊ အင်း နောက်တယောက် ကတော့ လူငယ်တွေကို တက်ပြီး အနိုင် ကျင့်နေတဲ့ကိုတက်လူငယ် (ဟီးး) နဲ့ဘ၀မလှတဲ့ ကို အညတြတို့ ဖြစ်ပါတယ် ရှင်....လက်ခုပ်တီးပီး အားပေးကြပါ။ ဖလောက်ဖလောက် ;kwekwe; (ခင်လို့ စတာနော် မခင်ရင် မစဘူးဒါပဲ) ...ချစ်သော မမတို့ ကို တော့ ချင်းချင်းတွေမို့ tag တော့ဘူးကွယ်...အာဘွားပဲပေးမယ်...။ မှတ်ချက် ။ ။ မမ၀ါရဲ့tag လေးကို တင်ပါတော့မယ် ...။
Post By ငှက်ငယ်လေး at 12:18 AM
Labels: tag, အချစ်နဲ့ ဘ၀
16 ယောက်က ဒီလိုလေးတွေပြောသွားကြပြီ:
ငါ့ညီမလေးက လည်း လက်စွမ်းထက်သား...။
အဲလို ရိုးရိုး ရေးတာလေးတွေကိုတော့ ဘရာ နားလည် သဗျား။ နောက်ပြီး မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ် နဲ့ ယောကျာ်းလေး ရဲ့ အချစ် တစ်ထပ်တည်း တော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို လက်ခံတယ်ဗျား။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်က အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် မာနကြီးလွန်းရင် မကောင်းသလို မာနမရှိရင်လည်း မကောင်းဘူး ဆိုတာလည်း ဟုတ်လောက်တယ်ဗျား။
ဒီဘက်ခေတ် ကလေးတွေကတော့ သိတော့မယ် မထင်ဘူး ဂီတ နက်သန် ကိုစောညိန်းရဲ့ "သစ္စာ"ဆိုတဲ့ သီချင်းကို။ ဘရာကတော့ အဲသီချင်းနဲ့ တူနေသဗျာ...
ထောက်ခံပါတယ် ညီမလေး ငှက်ငယ်ရေ... :)
အတွေးလေးက ဘယ်ဆိုးလို့လဲ ကောင်းတယ်ဗျာ
ရေးပြီးသွားကြပြီ ။ ဒီမှာတော့ ဦးနှောက်စားနေတုန်း။
ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်လေးနဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို
ငှက်ပိစိက တယ်ဟုတ်ပါလား။ အတွေးကောင်းလေးနဲ့ရေးတတ်တယ်ဗျား။ အချစ်နဲ့ ဘ၀ ထပ်တူထပ်မျှ ကျနိုင်ပါစေဗျား။
ရေးလဲရေးနိုင်ပါ့။ အချစ်ကို ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ ကဗျာလေး ကောင်းတယ်။
မပြောချင်တဲ့ တဂ်ကြီး တစ်ခု ပြုတ်ကျလာပြန်ပြီ...
ငှက်ကလေး ပြောတော့လည်း ဟုတ်သား
အစ်ကိုကတော့ အချစ်ကို ဘာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး
တော်လိုက်တာ ညီမရေ ... အချစ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လေးလေးနက်နက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်သွားနိုင်တာ သိပ်လေးစားပါတယ် ... ။ ငှက်ငယ်လေးရဲ့ ပိုစ့်ထဲက အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကို သဘောကျထောက်ခံနေမိပါတယ် ... ။ တကယ်ချီးကျူးတယ် ... ။
ညီမလေးရေးထားတာလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ကောင်းနေပါတယ်.တော်တယ် ညီမလေးရေ.
ဒါနဲ့ "မမ၀ါရဲ့tag လေးကို တင်ပါတော့မယ် ...။"
don't worry ... No problem. :D
အချစ်ခိုင်မြဲဖို့ နားလည်မှုလိုတယ်ဆိုတာကို မှတ်သွားပါတယ်
၄ခေါက် ကို သေသေချာချာ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ညီမလေး တော်ပါပေတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်ဒီလောက်ထိ ရှိတယ်နော်။ အစ်ကိုညီမ အရွယ်နဲ့ ညီမအသက် လောက်မှာ ဒါတွေကိုဒီလောက်ထိ နားမလည်ခဲ့မိပါဘူး။ လေးစားပါတယ် ညီမငယ်။ရေးဖို့ အားယူနေတယ် ညီမလေး။ ခွင့်ပြုပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားကို ခံစားသွားတယ်